ဆုံဆည်းရာ: မနက်ဖြန် ၂ ရက်ပေါင်းရင် သဘက်ခါ
မနက်ဖြန် ၂ ရက်ပေါင်းရင် သဘက်ခါ
စင်္ကာပူအစည်းအဝေးမှာ ငါတို့ နိုင်ငံက၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်ကို ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်တို့က သိန်းစိန်ကိုမေးတယ် Whentime do you go back your country? မင်းနိူင်ငံကိုဘယ်အချိန်ပြန်မလဲပေါ့။ ငါတို့ဝန်ကြီးသိန်းစိန်က ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးလေ ပြောချင်တာက
ငါသဘက်ခါ ပြန်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့သူက သဘက်ခါကို အင်္ဂလိပ်လို မပြောတတ်ဘူး။ မနက်ဇြန်တော့ ပြောတတ်တယ်။ ဒါနဲ့ သူလဲ မနက်ဖြန် ၂ ရက်ပေါင်းရင် သဘက်ခါဆိုတော့ the day after tomorrow လို့မပြောဘဲ Two tomorrow တဲ့။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား ထင်တယ် သူ အင်္ဂလိပ်
အဘိဓာန်စာအုပ် ထုတ်စားတော့မယ် ထင်တယ်။ ငါတို့တိုင်းပြည်တော့ သွားပါပြီမြောင်းထဲ။
ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပါ ဒီသတင်းကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးနေတယ်။ မြန်မာတွေနာမည်ပျက်ပြီဗျို့...
ဆရာလုပ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး... အစ်ကို. sentence မှားနေတယ်
Lee Hsien Loong ကတော့ "Whentime do you go back your country?" လို့ဘယ်နည်နဲ့မှမပြောတာသေချာပါတယ်။